Dalka Benin ayaa dib ulasoo wareegay hanti farshaxan oo Faransiisku hore uga dhacay - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Dalka Benin ayaa dib ulasoo wareegay hanti farshaxan oo Faransiisku hore...
Dalka Benin ayaa dib ulasoo wareegay hanti farshaxan oo Faransiisku hore uga dhacay
Benin ayaa Arbacadii shalay soo dhaweysay ku dhawaad ​​30 hanti boqortooyo oo laga dhacay gobolka Galbeedka Afrika intii uu socday gumaysigii Faransiisku in ka badan 130 sano ka hor.
Madaxweynaha Benin Patrice Talon iyo wasiirka dhaqanka ee dalkaas ayaa Salaasadii u safray magaalada Paris si ay u soo celiyaan 26 farshaxan, waana qeyb ka mid ah dedaalka uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku doonayo in lagu soo celiyo dhaxalka Afrika.
Diyaaradda siday hantida boqortooyada ayaa galabnimadii Arbacada ku degtay garoonka diyaaradaha ee Cotonou, oo ah caasimadda dhaqaalaha ee Benin, halkaas oo boqolaal qof ay isugu soo baxeen si ay u maamuusaan, iyagoo qoob-ka-ciyaar iyo damaashaad kusoo dhoweeyey hantidoodaa hore looga dhacay.
Ousmane Agbegbindin oo ku sugan wadada isku xidha garoonka diyaaradaha iyo madaxtooyada ayaa waxa uu yiri “Waxaan u imid in aan indhahayga ku arko in alaabtan ay runtii dalka dib ugu soo laabatay.
“Ma arki karno walxaha, laakiin xaqiiqda ah in aan ogaanno in carshigii awoowayaasheen, kabahoodii, hubkoodii iyo walxaha kale ay ku jiraan sanaaduuqda ay baabuurtani wado ayaa aniga saameyn aan la qiyaasi karin igu leh.”
Waddada hareeraheeda, qaar badan oo reer Benin ah oo intooda badan ku labisan dharka hiddaha iyo dhaqanka, ayaa ku sugayay laamiga dhinaciisa dhawaqa durbaanka iyo fanfaska ayaa la maqlayey.
Martine Vignon Agoli-Agbo, oo deggan waqooyiga Benin, waxay la safartay labadeeda gabdhood in ka badan 500 kiiloomitir (310 mayl) si ay u aragto waqtigan naadirka ah.
“Waxaan joognay Cotonou 24 saacadood, si aan u aragno imaatinka hantidan. Aad ayay u qiimo badantahay,” ayay u sheegtay AFP.
“Ma rabin in xilligan la ii sheego. Haddii carruurtayduna ay ila joogaan, waa si ay maalin uun u awoodaan inay carruurtooda u sheegaan.”
Soo celinta agabkii laga soo qaaday qasriga Abomey oo ay ku jiraan saddex taallo oo totemic ah, ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Afrika ay ku soo badanayaan baaqyada ku aaddan in dalalka reer galbeedka ay soo celiyaan booligii gumeysigu dhacay.
Dalka Faransiiska, badi waxa haysta madxafka Quai Branly, kaas oo bilaabay dib u eegis lagu sameeyo ururintiisa si loo aqoonsado shaqooyinka qaar ay sheegaan in lagu helay rabshado ama qasab.
Sharci-dajiyayaasha Faransiiska ayaa sanadkii hore meel mariyay sharci ogolaanaya in Paris ay dib ugu soo celiso alaabada Benin iyo Senegal, oo kale oo ay hore u gumeysan jirtey.
Talon wuxuu sheegay inuu u arkay xil wareejinta Talaadada inay tahay tillaabadii ugu horreysay ee lacag soo celin ballaadhan.
Benin, waxaa lagu soo bandhigi doonaa dhowr goobood, oo ay ku jiraan qalcaddii hore ee Bortuqiiska ee Ouidah, iyadoo la sugayo dhammaystirka madxafka Abomey.
Khubaradu waxa ay qiyaaseen in boqolkiiba 85 ilaa 90 agabka dhaqanka Afrika laga soo qaatay.
Qaarkood waxaa gacanta ku dhigay maamulayaal, ciidamo ama dhaqaatiir gumeystaha ah, waxayna u dhiibeen faracooda kuwaasoo iyaguna ugu deeqay madxafyada Yurub iyo Mareykanka.
Laakiin kuwa kale waxay ahaayeen hadiyado la siiyay adoonsadayaashii ama waxaa helay ururiyeyaal faneedka Afrika bilowgii qarnigii 20-aad amase waxaa lagu daah furay socdaallo cilmiyeed.
Gudi khubaro ah oo uu u xilsaaray Macron ayaa tirisay ilaa 90,000 oo Afrikaan ah oo ka shaqeeya madxafyada Faransiiska, 70,000 oo ka mid ah waxay ka shaqeeyaan Quai Branly oo keliya.
Britain, Belgium, Netherlands iyo Germany ayaa sidoo kale helay codsiyo uga yimid wadamada Afrika si ay u soo celiyaan hantidii ay qaateen.
Nigeria waxay sheegtay bishii hore inay Jarmalka kula heshiisay soo celinta boqollaal waxa loogu yeero Benin Bronzes — tabeelooyin bir ah iyo sawirro laga soo qaatay qarnigi 16-aad ilaa 18-aad kuwaas oo laga xaday qasrigii boqortooyadii hore ee Benin waa Nigeria dhulka loo yaqaan maanta.
Previous articleSaaka iyo twitterka Raisal-wasaaraha Itoobiya
Next articleKumanaan kun oo reer Tunisia ah ayaa isugu soo baxay Sfax ka dib markii ay ka mudaaharaadayeen dhimashada